आँधीखोला खवर | विज्ञको दावी : नेपालमा सलहले ठूलो क्षति गर्दैन,सुरक्षित हुने तरिका के छ ? - आँधीखोला खवर विज्ञको दावी : नेपालमा सलहले ठूलो क्षति गर्दैन,सुरक्षित हुने तरिका के छ ? - आँधीखोला खवर
विज्ञको दावी : नेपालमा सलहले ठूलो क्षति गर्दैन,सुरक्षित हुने तरिका के छ ?
अफ्रिकाबाट भारत हुँदै शनिबार नेपाल प्रवेश गरेको सलहले ठूलो क्षति पु¥याउन नसक्ने बताइएको छ । सर्लाही, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, सिन्धुली, चितवन, रामेछापलगायत जिल्लासम्म सलह पुगे पनि यसले आइतबार साँझसम्म खासै क्षति गरेको छैन । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा नियन्त्रण प्रयास अगाडि बढाइएको छ ।
उनले भने, ‘‘वर्षाका कारण सलहले पटकपटक ठाउँ सारिरहेको छ । त्यही भएर क्षति भएको छैन । घाम उदायो भने उसलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ र झुन्ड बनाएर उड्छ । त्यसले भने क्षति गर्छ तर पानी परिरह्यो भने विस्तारै आफैँ हराउँछ यद्यपि ढुक्क भने हुन सकिन्न ।
कसरी हुन्छ नियन्त्रण ?
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सलह नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयसँग समेत समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले सानो झुन्डमा आएको छ । भोलि गएर ठूलो झुन्ड आयो भने सुरक्षा संयन्त्रको पनि सहयोग लिनुपर्छ भनेर गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरेको कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले जानकारी दिए। प्रत्येक प्रदेशमा ‘टाक्सफोर्स’ गठन गरिनुका साथै विषादी छर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि विषादी छर्किन दमकल, ट्याक्टर, स्प्रे, पीपीईलगायतका उपकरणको समेत व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विषादी अन्तिम विकल्प :
विषादी छर्नु अन्तिम विकल्प हो भन्दै प्रमुख हुमागार्इंले भन्नुभयो, नेपालमा अहिले नै विषादी छर्किने अवस्था आइसकेको छैन, अहिलेलाई वैकल्पिक उपायहरू मात्र अपनाउने हो । गोरखापत्र दैनिकमा सुरेशकुमार यादवले समाचार लेखेका छन् ।